226336 visiteurs - 516430 pages vues
Ny fomban’ny mpianakavy
Fady tamin’ny zandry aman-janaka ny mipetraka, na mandry, eny amin’ny ambonimbony toerana noho ny ipetrahana na andrian’ny zoky sy ny ray aman-dreny. Ny tongo-pandriana koa tsy azo atao amin’izay manipaka ny an-dohafandrian’ny ray aman-dreny. Ary tsy azon’ny zatovo atao ny misolontsolona mankeny avara-patana, toerana fanajana ny zokiolona, raha tsy sendra antsoina hipetraka eny angaha !
Ny zoky lehibe dia tsy sahy tononina ho”zoky” fa atao hoe “ray aman-dreny” ary ny vadin-joky dia atao ho toy ny reny mihitsy. Ny antitra dia atao henin-kaja na dia tsy vola tsy harena aza !
Raha miara-misakafo ny mpianakavy dia tsy misy sahy mandray sotro sy mihinana raha tsy ny ray aman-dreny zokiny indrindra ao an-trano no efa mikatroka. Ary raha voky aloha aza ny zandriolona, dia tsy sahy miseho ho mijanona, raha mbola mihinana ny ray aman-dreny, fa dia mihinankinan-tsi-sazoka eo. Izay maika loatra, ka tsy maintsy miainga alohan’ny ahalanian’ny sakafon’ny olona rehetra dia miala tsiny mafy sy manao “aza fady handao homana”.
Fomba ny Ntaolo koa ny mampiray vilia ny mpirahalahy na ny mpirahavavy, ka rehefa kely sisa ny vary dia avela ho an’ny zandriny ary raha miteny ilay zandriny izay sisana ka manao hoe “hano ihany e” dia valian-jokiny kosa hoe : hano ho anao, fa ianao no hitondra sobika!
Ary amin’ireo izay miombom-bary toy izany, raha sendra voky aloha ilay zandry dia diso amin’ny lalàm-panajana izy raha avy dia mametraka sahady ny sotrony, fa tazonina eny an-tànana eny ihany iny mandra-pijanon’ilay zokiny ombonam-bary.
Na vorona, na akoho no loaka dia an’ny ray aman-dreny ny vodiny ary ny an’ny zaza kosa ny feny. Koa raha misy zanaka mahatelim-bodiakoho nefa tsy lavitra ny ray aman-dreniny dia atao ho fahadisoana lehibe indrindra amin’ny lalàm-panajana izany na dia hoe efa mahatsangy no àry manan-tokantrano aza izany zanaka izany!
Ny zandry aman-janaka, raha toloran’ny ray amandreny hanina, na zavatra hafa dia mananty tsara, fa tena tsi-fanajana ny mandrompotra ny zavatra raisina: tànan-droa mihitsy aza matetika no anantazana azy.
Raha mangetaheta ny zandry dia tsy sahy misotro avy hatrany rehefa mahazo rano fa manadina ny zoky sy ny ray aman-derny manatrika eo aloha, ka manao hoe “sao hisotro hianao ?” Rehefa milaza tsy hisotro ireo vao misotro amin’izay ny zandry.
Natao ho zava-pady indrindra koa ny manira-joky sy ray aman-dreny, ka raha sendra misy zavatra tiana horaisina, nefa mipetraka eo akaikin’ny zoky na ny ray aman-dreny, ka manerantserana azy loatra ny aleha eo handray iny zavatra iny, dia manao azafady sy miala tsiny mafy ny zandriolona mangataka ilay zavatra.
Raha misy vahiny misakafo ao an-trano dia fanaony tompontrano ny miteny matetika hoe “hano, tompoko e! aza tsiny fa tsizarizary ny nahandro !” Ary raha fanasana sy fihinanambe no atao dia mitondra mody amin’ny sakafo ny olona nasaina, fa tsy mety ny milaza rezatra fotsiny rehefa mby any an-tranony.
Eny an-dalambe na eny an-tsena
Rehefa eny an-dalam-be dia tsy mialoha ny zoky raha ray aman-dreny ny zandry, afa-tsy raha sendra maika loatra ary amin’izay manao “azafady fa hialoha kely”. Na dia olona tsy fantatra aza rehefa hialohan-dàlana, dia anaovana “azafady”.
Raha sendra misy olona mipetraka eo amoron’ny làlana lalovana dia tsy fanao ny manerana olona tsy manao “mbay làlana, tompokô!” Raha ray aman-dreny lehibe, na olona manan-kaja ambony ilay holalovana dia somary miondrika sy misava làlana kely amin’ny tànana ankavanana raha “mangata-dàlana”. Tsy miandry ela tafahodina vao miteny, satria tsy mety raha efa manerana vao manao mbay làlana.
En en-tsena kosa anefa, noho ny hamaroan’ny olona tsy maintsy holalovana, dia tsy heverina ho tsi-fanajana intsony ny tsy manao mbay làlana; koa ny mpiasabe vonton’anatra ihany no sisa manao mbay làlana an-tsena.
Ny entana eny amin’ny zoky na ny ray aman-dreny dia raisin’ny zandry sy ny zanaka ho entiny: tsy atao fialan-tsfay foana anefa izany, fa tena entiny tokoa, raha tsy dia sendra efa mba mitondra entana hafa tsy azo akambana, dia tsy fanao ny mitsatsaingona mialoha zoky na ray aman-dreny, raha tsy asainy manao. Izany no nihavian’ny ohabolana hoe : manan-joky afaka olan-teny, manan-jandry, afaka olon’entana.